Isimo esaziwa ngokuthi ukuzindela, ngokusho izibalo ajwayelekile zonke omele yeshumi lesintu. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi iphesenti ehlaselwe ngalokhu kugula akuyona liphezulu kakhulu, yize cishe njalo umfundi uzokhumbula izikhathi lapho wazizwa yisisulu kulesi simo endaweni nezinye procrastinators. Futhi lokhu kungokwemvelo, ngoba isimo yokukhathala kwemizwa, ngokomzwelo nangokomzimba kuyafana ukuzindela.
Ukuncipha kwamanzi uya emva ukuphumula, futhi ukutubeka ngenxa self-ukuketula amashumi.
Ukuhlehlisa ohlwini, ehlanganisa amafomu ahlukahlukene kanye oluyinqaba ukuziphatha ngandlela-thile kukhona nje kuwukubonakaliswa self-ukuketula. Futhi, njengezinye izinhlobo izinhlelo zokuziphatha, imodeli ukuzindela igcwele ezingibeni eziningi. Lezi izicupho, okungenakuqhathaniswa, okuletha ukuthula ukugula, bheka ayinangozi, kodwa bakwazi ukuphila futhi ukuzethemba yimuphi umuntu ebhekene nabo ababhubhise.
Ngokuvamile, umuntu uhlushwa ukungakwazi ukusayinda ibhizinisi kuhlelwe isikhathi, libhekene yokuntuleka amandla imizwa ithulisiwe, qaphela ukuze uqale-up kanye phakathi kwalo.
Bambalwa abantu bazi ukuthi abantu abaningi abasinaki futhi ukukhathala uma ukuzindela ngezinye izikhathi labasibekela. Bese umuntu abe nomuzwa wokuthi inflow bamabutho, uwe esicuphweni ngone izinyanga esilandelayo ambalwa wokuphila futhi ababhubhise ukugcwaliseka nokuzinyeza.
Le ndoda Sekuyisikhathi eside wahlushwa ukungakwazi kalula iqale ukusebenza kunoma iyiphi ibhizinisi kanye ukukhathala, usuku olulodwa evuka nomqondo wokuthi sekuyisikhathi ukuhumusha amacebo abe amaqiniso. Futhi uma nguye ophethe ukuqala ukuhumusha ibe yinto engokoqobo isabelo umsebenzi noma iphrojekthi sakhe, ukuba khona umkhuba wokuzilimaza ukuketula nomthelela ekuthuthukisweni esikhathini esizayo.
I inguqulo yokuqala ekuphileni kamuva ukuthi abantu izozama wakubeka konke naye abe umuntu phrojekthi. Ngeke enze izinga zakhe eziphakeme, okusheshayo, kungenzeka ukuthi ngaphambi kosuku target, kodwa ngemva kokuwa phezu kombhede futhi wayengeke akwazi yenza itiye uqobo. Abantu abahlala nalaba ukuzindela eminyakeni, yazini ukuthi isikhathi ukuyimisa nakakhulu, uqala umsebenzi ngesikhathi esimisiwe. Futhi angomakad 'ebona nokuzibona ukuketula, eqala indlela ukukhathala ubuvila, ukweluleka, uma ungaqali ngesikhathi esimisiwe, okungenani-ke uhlale kuze kube ngomzuzu lapho amehlo aqale mnyama.
I Kwesesibili nakakhulu, njengoba umuntu, uzizwa kuqubule amandla, impumelelo uqala futhi aphethe ngokucela into eyodwa ezincane. procrastinator Landelayo, angayinaki izwi logic kanye nokuhlolwa okuphusile izimo, enquma ukwenza amacala amaningi ngobusuku obubodwa. Caught kulolu gibe abantu babenethemba kuze kube ngomzuzu wokugcina bese sizama ukunqamula phandle zonke izinto uhlu amacala amahlanu. Ngo uhlu ngengqondo noma uyibhala ephepheni angase abe mancane futhi ibhizinisi odinga izisebenzi eziningi. Procrastinator, sabanjwa esinye esungulwe isifo izicupho, uzama ngolunye usuku izimbali utshalwe kabusha, perestirat zonke izingubo futhi ifenisha nesembozo, ukupenda ophahleni ekamelweni, ukuhamba inja futhi enze ezinye izibopho. Ngaphezu kwalokho, ukuze kufezwe esifike ngesikhathi kuzo zonke imigomo umuntu, wababeka phambi ungakwazi nginikele dinner afudumele futhi sokulala. Ngomqondo onabile, njengoba ukwenza cishe wonke procrastinators, kusukela ezikhathini eziningi ukubulawa umsebenzi oda selihlehliselwa ekuseni.
Uma uzama ukuqeda lenqwaba imisebenzi usuku olulodwa Indoda enquma ukushintsha izimpilo ngakho, uthole ikhanda, ucasukile, beqiniseka ukuhluleka kwabo kanye nokungakwazi ukushintsha into.
Evocation nomsebenzi ngokweqile e ukuzindela, njengasezulwini ukwenama-bacindezeleke syndrome, zidinga kwemicabango kancane ekuthathweni nokuziphatha. Awukwazi ukwenza amacala ayisikhombisa kancane ngaphezulu ngosuku olulodwa. Ngokuvamile, kwafika isikhukhula esisabekayo ezinjalo amandla nesifiso sokwenza konke konke procrastinators kanye sebedlula uma ungena esimweni sokuthola ubuvila sokugembula. Futhi kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi ukulinganisela abasindise kusuka nciphisa ngemva isimo hyperactivity, kanye wokutakulwa isimo nokunganaki. Ngaphezu kwalokho, izinto ezimbili ezenziwe usuku kangcono kwamashumi amane eziqaliswe futhi akekho igcwaliswe.